Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:19 PM
ဆရာကြီး စိန်သံလုံးခင်ဗျာ မြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်း နောက်လိုက်ပိုင်းတွေကို သမိုင်းနှင့်တကွ ရှင်းလင်းပြတာကိုကျေးဇူး တင်ရပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ဆရာ့ကိုပြန်လည် အကြံပေးချင်တာက ဆရာက ဝေဖန်ရေးသက်သက်ပဲလုပ်မှာလား ကိုယ်ကို တိုင်ခေါင်းဆောင်လုပ်ပေးပါလား ။ အများရှေ့မှာ ထွက်ပြီးရပ်ပြပါလား ထောက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ ဆရာ့ အရည်အချင်းတွေကို တွေ့ရ မြင်ရ ရင်ဘယ်သူမဆို ရိုးသားစွာထောက်ခံကြမှာပါ ။ ဆရာကိုယ်တိုင်ကိုက ဦးစော ၊ သခင်ဗစိန် ဖြစ်မနေဘူးလားဆရာ နောက်တခု ကွန်မြူနစ်ဖြစ်မနေဘူးလားပြန်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးသပ်ပါအုံးဗျာ ။ ကွန်မြူနစ်တွေက ဘယ်သူလုပ်ထာကိုမှ မထောက်ခံကြပါဘူး တလျှောက်လုံး အပြစ်တွေချည်းပြောခဲ့တယ် ။ သူတို့လုပ်ထာကြတော့ ( ပြောတော့မိုး .(..........)ပါခင်ဗျာ
NLD အနေနဲ့ ပါတီအင်အားကိုပိုမိုကျစ်လစ်ခိုင်မာလာ
chay say said...
စာရေးဆရာဆိုတာ စာရေးခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုး တစ်ဖက်တစ်လမ်းက သယ်ပိုးတာပါ။
အများစု လက်ခံတာ၊ မခံတာက ပြည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ထောက်ပြထားတာတွေဟာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ချင်မှ မှန်မှာ ဆိုပေမယ့် လက်ခံနိုင်စရာတွေ အများကြီးပါ..
ဒီလို ထောက်ပြလာတာတွေကို အလုံးစုံ လက်မခံဘဲ ဘေးဖယ်ထားသရွေ့တော့ တိုးတက်ကောင်းစားဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးမှာပါ...
Byaing Kyo said...
မသိလို့ မေးပာဦးမယ် ... မင်းတို့ကောင်တွေက ဘာကောင်တွေတုန်း နိုင်ငံရေးသုခမိန်တွေလား?
စောက်ရူးတွေ ... ကိုယ့်အဆင့်ကိုလည်း နားလည်ကြဦး ...
ငာတို့က ဒှောစုကို ကိုးကွယ်ကြတယ်ထားပာတော့ ... မင်းတို့ကို ပြောင်းကိုးကွယ်စေချင်လဲ (မင်းတို့ပြောတာကို အလေးထားစေချင်လဲ) မင်းတို့အရည်အချင်းလေး ပြောကြပာဦး ... ဘာကောင်တွေမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ဆရာကြီးမလုပ်ချင်ကြစမ်းပာနဲ့ လွဏ်းဆွေနဲ့ လွဏ်းဆွေ နောက်လိုက်ခွေးလေးတွေရာ
ABC ပါတီ ဥက္ကဌ မောင်လေရှီး said...
စိန်သံပြားကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ အရှေ့မှာရေးထားတာက .... လူတဦးတယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက် အပေါ်ကို အလွန်အကျွံ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် တိမ်းညွတ်မှုကလည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အစဉ်အလာကြီးလို ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ အဲဒါကို အားနည်းချက် တခုလို့ မြင်သင့်တယ်။ ခေါင်းဆောင်တယောက်တည်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ အများစုပေါင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ထက် ပိုမကောင်းနိုင်ဘူး။ ..... တဲ့ ခေါင်းဆောင်တဥိးတည်းကိုအားမကိုးသင့်ကြောင်းပြောထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်မှာဆက်ရေးတာက ....ပါတီခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေက မိန့်ခွန်းတွေ တွင်တွင်ပြောပြီး လုပ်ရပ်ကတော့ ဆွံ့အနားမကြားတဲ့အဖြစ်မျိုး ရောက်နေပြီးတော့ ကချင်ကိစ္စ၊ ရခိုင်ကိစ္စတွေမှာလည်း တရှောင်ရှောင်နဲ့ နာတာရှည် နှာစေးပြီး ကြောက်ဖျား ဖျားနေကြတယ်။ ဘယ်မှာလဲ ပြည်သူအားကိုးရမယ့် ခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်မှာလဲ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ရွက်သူတွေ ... ။”
စိန်သံပြားတို့ မောင်လွဏ်းဆွေတို့ ကို ကြံ့ဖွံ့ ကမွေးလိုက်ပြီဆိုတာသိသာပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ စရဖ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ ဒလံတွေထဲမှာ မောင်ရင်တို့ ပါသွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူး သူတို့အထောက်အပံ့ယူထားဒါကြောင့်လဲ တဆိတ်ရှိ NLD နဲ့ ဒေါ်စုကိုပဲတိုက်ခိုက်ရေးသားတဲ့ တာဝန်ရှိနေတာအခုမှနားလည်တယ်။
ို ( လေရှီး ) ဆိုတဲ့သူကိုပြောချင်ပါတယ် ဒီနာမည်ကဘာအဓိပ္ပယ်လဲလို့ ထမင်းစားသူတိုင်းသိ
ိပါတယ် ။ ကိုရင့်အမျိုးတွေနဲ့ဒီနာမည် လိုက်ဖက်ညီမယ်
ထင်တယ်။ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ငါတို့က
၁ ၂ ၃ ( လေရှီး ) သမဂ္ဂ ကပါ တော်တော်ကို လေရှီး
ကြပါတယ် ။ ကိုရင်တို့ဒေသကို စည်းရုံးရေးဆင်းချင်
်ပါတယ် ။ အဖွဲ့ချင်းမတူပေမဲ့ နာမည်ချင်းဆင်တူနေ
တော့ လုပ်ဆောင်ချက်တူမှာသေချာပါတယ် ။ ကိုရင့်နှစ်မ တွေ အဒေါ်တွေ ကို ပန်းစည်းတွေနဲ့ ကြိုဆိုခိုင်းဘို့မမေ့ပါနဲ့။ အော်မေ့လို့မေ့လို့ ဆက်ပြောပါ့မယ် အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေကိုပဲ ကြိုခိုင်းပါနော် ဒို့က တော
်တော့ကို လေရှီး ကြလို့ပါနော်
ABC ပါတီဥက္ကဋ္ဌ မောင်လေရှီးမှာကူလီတွေတော်တော်
များများ ရှိနေတယ်ထင်ပါ့ ။
ဟေ့ မင်းသတ်နိုင်မောင် , ABC ပါတီဥက္ကဋ္ဌ မောင်လေရှီး နဲ့ငါ့ကို သားအဖလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားက မင်းအမေကို
ကိုမင်းသတ်နိုင်မောင်ရေ ကျနော့ လူလေးကို ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါဗျာ
ဒီကောင်က မိတဆိုးသားလေးဆိုတော့ နဲနဲ ရိုင်းတယ်ဗျ
ကျနော်လဲ ဆုံးမနေတာဘဲ ဆုံးမလို့ကိုမရတာ
သူများက အမင်ကပ်ကပ်နဲ့ လုပ်ထည့်လိုက်တာ
ကျနော် အိမ်ကျရင် မှတ်လောက်အောင် ဆုံးမပေးလိုက်ပါ့မယ်ဗျာ
ဟေ့ကောင် ဖြိုးဝေဝင်း မင်းကဘာကောင်လဲ ကွန်မင့်ရေးတဲ့သူနဲ့ ကွန်မင့်တွေကို မင်းသေသေချာချာ ဖတ်ပြီးပြီလား ဒေါ်စုကိုဝေဖန်တယ် NLD ကိုဝေဖန်
တယ် ၊ဝေဖန်ရေးကို ငါလက်ခံပါတယ် အမှန်ကိုဝေ
ဖန်ပါ မလိုစိတ်နဲ့တော့ မဝေဖန်နဲ့ နောက်ပြီးဝေဖန်တဲ့ ကောင်ရဲ့နာမည်က ( လေရှီး ) တဲ့ လေရှီးဆိုတာ လီး
ရှေ လေကွာ မင်းသီလား အဲဒီကောင်ကိုတခါ သွားပေါင်းပြီး မဆီမဆိုင်ကြားကောင် မင်းသတ်နိုင်
အဲဒါတွေကို မင်းမတွေ့ပဲ တွေ့ပြန်တော့လဲ မသိသလိုနဲ့ မင်းကပါတခါ ဝင်ဖြဲနေပြန်သေး ဟေ့ကောင်တွေ လီးပဲကွ ခွေးတရာ မြောက်တထောင်လိုးမသားတွေ
သယ်ချင်း ဘာပဲဖြင့်ဖြင့်ကွာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလတလျှောက်လုံး သတင်းစာကို ပြောင်းပြန်းတွေးဖတ်ခဲ့ရတာ မင်းရောငါရောပဲ ခု လည်း တွေးဖတ်သင့်ရင်ဖတ်ပေါ့ကွာ မင်းအဲဒီလောက်မအပါဘူးနော